HomeDUNIDAAasiya962 Jordan'Taariikhi Taariikhi ah ee Hejaz oo ay la socoto Dukumiintiyo Muujinaya Ser Exhibition Heeld in Jordan
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 962 Jordan, Aasiya, DUNIDA, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline 0
bandhiga taariikhiga ah ee tareenka ee hejaz ee magaalada urdunde oo leh dokumentiyo la furay
Bandhigga "laga soo bilaabo Istanbul illaa Hijaz: Hicaz Railways oo wata dukumiintiyo" oo ay soo qabanqaabisay Hay'adda Iskaashiga iyo Xiriirinta Turkiga (TIKA) iyo Machadka Yunus Emre (YEE) ayaa laga furay Irbid, magaalada labaad ee ugu weyn Urdun.
Waxaa loo habeeyey iyada oo lala kaashanayo TIKA iyo YEE bishii Juun ee la soo dhaafay, joogsiga labaad ee bandhig, kaas oo lagu qabtay caasimadda Amman, wuxuu ahaa Irbid, mid ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee Urdun. Furitaanka bandhiga 19. Waxaa dhisay danjiraha Turkiga ee Amman Murat Karagöz oo ku yaal matxafka Dar As Saraya, oo loo dhisay qalcad Ottoman qarnigii 16aad.
In hadalka uu furitaanka, ee 2020 sano, "Urdun Mutual Turkey Dhaqanka Year" Ambassador dhawaaqay xusuusiyey in Karagoz Macnaha this, dhacdooyin ay sii wadi doonto in la soo abaabulay, ayuu yiri.
Karagöz wuxuu intaas ku daray in howlaha dayactirka ay ka wadaan Saldhigga Amman ee tareenka TİKA iyo dhismaha matxafka, kaasoo sharixi doona taariikhda tareenka Hejaz, inuu socdo.
Wajahadda dhacdada dhexdeeda, dokumantiyo iyo sawirro ayaa lagu soo bandhigay 100, kaasoo ka badbaaday kaydadkii Ottoman. Bandhigga, II. Ololaha tabaruca ee uu bilaabay Abdulhamid waxaa ka mid ahaa dukumiintiyo, tusaalooyin tilifoon, xiriir rasmi ah, khariidado taariikhi ah iyo sawirro dadka taageeray gudaha iyo dibedda Ottoman.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeyb galay qabiilada Carab iyo Turkmen, ganacsato, aqoonyahano, mas'uuliyiin dowlada ah iyo marti sharaf Turki iyo Jordan oo daggan Irbid.
Suldaan II. Waxaa la dhisay inta u dhaxaysa Dimishiq iyo Madiina intii u dhaxeysay sanadihii 1900-1908, oo uu Abdulhamid Khan ka sheegay wadada 'The Hejaz Railway sida dır riyadeedi hore'. Dhismaha khadka khadka ka imanaya Dimishiq ilaa Madiina waxaa lagu gaarey Amman gudaha 1903, Maan ee 1904, Medayin-i Salih ee 1906 iyo Madiina gudaha 1908.
Dhismaha wadada tareenka ayaa lagu dhammeystirey waqti la aqbali karo in kasta oo ay jiraan dhibaatooyin ba'an oo ay sababaan kuleylka aadka u daran, abaarta, biyo yaraanta iyo dhul xumo.
Hicaz Railway, oo ah mid ka mid ah mashaariicdii ugu muhiimsanaa muddadaa, waxaa lagu qanciyay deeqaha ay u soo marsiisay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta muslimiinta ku kala nool juqraafiyo kala duwan oo adduunka ah waxayna noqotay shaqo muujineysa midnimada Muslimiinta. 1 / 3 waxaa laga helay tabarucyo iyo 2 / 3 dakhliyada kale.
Ka sokow soo saarista cawaaqib xumo milatari, siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsheed oo loogu tala galay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, tareenka waxaa loo yareeyay afartan iyo shan maalmood oo xajka oo khatar ah, kaasoo socday ku dhawaad ​​afartan maalmood iyo konton maalmood laga soo bilaabo Makka ilaa Suuriya.
Tika si loo dhiso matxafka Hijaz Railway ee Jordan 28 / 03 / 2016 Tika si ay u dhisto matxafka Hicaz Railway ee Jordan: Hay'adda Iskaashatada iyo Iskaashatada Turkiga (TIKA) waxay soo celineysaa kana bedeli doontaa Hicaz Railway Amman Train Station aalado ku yaala Jordan. Xafiiska Isuduwaha Barnaamijka Tika Amman ayaa si rasmi ah u furaya ra'iisal wasaare Ahmet Davutoglu booqashadiisa Jordan. Inkasta oo TİKA uu bilowday inuu ka shaqeeyo Webi Urdun, wuxuu kaalin firfircoon ka ciyaaraa dalka mashaariiciisa. Tiknoolojigan, TIKA wuxuu mashaariicda ka fuliya mashaariic badan oo laga helo waxbarashada dib-u-dhiska, daryeelka caafimaadka iyo gargaarka bini'aadanimo. II. Jidka tareenka ee Hejaz, mid ka mida mashaariicda muhiimka ah ee xilliga Abdulhahid Khan, ayaa la dhisay inta u dhexeysa Damascus iyo Medina oo u dhexeeya 1900-1908 sano. 1 September
Xarunta Madiina, Joogitaanka ugu dambaysa ee Tareen Taariikhda Hijaz 27 / 08 / 2018 Saldhigga Madiina, oo ah meesha ugu dambaysa ee Tareenka Hejaz, ee la dhisay xilligii xukunka Abdulhamid, ayaa laga sii daayay qaddiyaddiisa muddo sannado ah, waxaana loo badalay hoolka muusikada hawada ee furan. Waxaa suurtagal ah in la daawado animation muujiyo muusikada reer galbeedka. SULTAN 2. Medina wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu muhiimsan ee Jidka tareenka ee Hejaz, kaas oo uu dhisay Cabdullaahi waxaana uu kumanaan qof oo xajin ah sanad walba qaateen. In kasta oo dhammaan isku dayo of Turkey looma oggola inay furto Hejaz Railway Station ah, kaas oo sidoo kale waa stop ugu dambeeya ee Medina, ka dib markii loo tagay sanado haatan waxaa loo beddelay qaddar cabaret u furan-hawada ah. Idaacadda ayaa ku taal kaliya hal kilomitir oo ka jirta Masjid al-Nabawi ee Madiina, halkaas oo boqollaal kun oo muslimiin ah ay sannadka soo booqdaan
Maanta Taariikhda: 6 Maarso 1908 Xagaaga, tirada askarta ka shaqeysa Xuduudka Hejaz ayaa la kordhiyay ilaa kun qof. 06 / 03 / 2012 Xagaagii 6 Maarso 1908, tirada askarta ka shaqeyneysa Jidka tareenka ee Hejaz ayaa la kordhiyay ilaa kun qof. Bishii Juun, dhammaan qabiilooyinka ayaa ka soo horjeeda tareenada oo wadajir u sameeyey tallaabooyin wadajir ah isla markaana waxay galeen weerarro wadajir ah.
Shirkadda 1900 Hicaz Bandhigga Tareenka oo la furay KBU (Sawir Sawir) 10 / 10 / 2013 Shirkadda 1900 Hicaz Railway ayaa la furay oo ku taala KBU: Agaasimaheena Tiknoolajiyada Jaamacadda ee Foyer 11aad. Mashruuca Shirkadda Isgaadhsiinta Caalamiga ee Rail Railway, CI Hicaz Railroad oo ka timid 60 ilaa Maanta maanta ayaa waxaa furay macalimiin cilmi baarayaal ah Mustafa Gezici iyo Engineer Mihnadeed Muhammed Nuri Kömeç halkaasoo sawir 1900 lagu soo bandhigay. Exhibition, Gobalka Karabuk Izzettin Kus, oo ah Rector. Dr. Agaasimaha Burhanettin Uysal Karabük Gobolka Police Oktay Keskin, Tareennada Waxbarashada Turkey iyo Waaxda Tababarka Head Dr. Kasım Özdemir, KARDEMİR AŞ. Fadil Demirel, Maamulaha Guud ee TÜDEMSAŞ A.Ş. Yildiray KOÇARSLAN, Maamulayaasha, Shaqaalaha Waxbarashada iyo Maamulaha Jaamacadda
Khadkii Tareenka ee Bursa ma ahan mid dhakhso badan 'Heerar Sare'
Tika si loo dhiso matxafka Hijaz Railway ee Jordan
Xarunta Madiina, Joogitaanka ugu dambaysa ee Tareen Taariikhda Hijaz
Maanta Taariikhda: 6 Maarso 1908 Xagaaga, tirada askarta ka shaqeysa Xuduudka Hejaz ayaa la kordhiyay ilaa kun qof.
Shirkadda 1900 Hicaz Bandhigga Tareenka oo la furay KBU (Sawir Sawir)
Maanta Taariikhda: 4 June June 1900 ayaa 50 kun garaac ugu deeqday Sultan Abdulhamid's ee Hejaz Railway.
Maanta taariikhda: 15 September 1917 650, gaasta 4 iyo lakabada telegraph ayaa lagu khaldiay Tareenka Hejaz ...
Maanta taariikhda: 8 Febraayo 1918 1100, biriij 12, 25 telegraph pole on Hejaz Railway ...
Maanta taariikhda: 6 March Tirada askarta ku shaqeysa Xeerka Hejaz ee xagaaga ee 1908 ...